I-Software ye-idala kwaye ithumela isixa-imeyile imiyalezo.
Elinolwazi-software ye-e-mail amaphetshana
Inkqubo akusebenzi kufuna ufakelo, qhuba emva unzipping ulawulo.
Multilingual-bume. Ngaphandle kwemida.
Ividiyo Framework 4.5
ImisebenziKunokuba XMailer III differs ukusuka kwelinye
Enkulu ukhetho izixhobo kuba eyodwa imifanekiso kwaye okubhaliweyo.
phezu indlela yonikezelo kwaye visual ukubek'iliso kwinkqubo.
Ingqokelela yamanani ifunda
Ukufumana phandle njani abantu abaninzi vula kwaye ukufunda wakho kwincwadana.
Umsebenzisi-eyobuhlobo umhleli ziya kukunceda yenza i-imeyili apha: isikhokelo se-imeyili.
Ukuqalisa ngaphandle ufakelo
Inkqubo isebenzisa nkqu kunye intonga ngaphandle kubhekiswa kwi - "hardware".
Iqela leengcali zethu uya kufumanisa nge-imeyili amaphetshana ukususela ngowama-2008 kwaye ukuba ixesha sino accumulated baninzi amava. Kwi-XMailer thina constantly baqonde zethu achievements kwaye ufumane nabo kuba free kwi-wonke ukuhlaziya.
Free kwaye unlimited
XMailer yi free isicelo sephepha-imeyili apha: unikezelo. Free lwe-ayina kwezixhobo zokusebenza kwi-ixesha kwaye inani wathumela email.
Isixhobo kuba iingcali
Kuba abasebenzisi abanqwenela ukufumana zonke zethu amava kwaye inkonzo lula ukwenza ngobuchule mailings kwindawo enye isicelo, thina kwaphuhliswa ngokupheleleyo inguqulelo. Oko kuza ngamnye emva kokuthenga; a ihlawulwe yephepha-mvume.
Olukhawulezayo stats umsebenzisi XMailer
Sisebenzisa steadily lokukhula kwaye ngalo mzuzu:
Thatha iscreenshot Thatha iscreenshot XMailer III
Zama kuya kuba free
Fumana zethu apps free.
Reviews ka-XMailer IIIUkufumana phandle into abantu kuthi malunga nathi
Озадачился поиском программы для прогрева серверов, всё что находил либо не подходили по параметрам и ukusebenzaу, либо по цене. Совершенно случайно в каком то видео услышал, что есть такая программа Xheater, купил её, но выяснилось, что те сервера, которые настраивал я, почему то не подключаются к...